ဇာတိရွာလေးကိုပြန်ပြီး (၂၂)ပြည့်မွေးနေ့ကို အလှုလေးပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Online News Post
ဇာတိရွာလေးကိုပြန်ပြီး (၂၂)ပြည့်မွေးနေ့ကို အလှုလေးပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဖြူဖြူထွေး က တော့ ဟာသ ဗွီဒီယိုလေး တွေ က တဆင့် လူသိ များလာခဲ့ ပြီး သူမရဲ့ ကြိုးစားမှု ကြောင့် အချိန်တို တွင်း မှာ အောင်မြင်မှု တွေ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … .
ဖြူဖြူထွေး က တော့ မိဘ ကို သိတတ်ပြီး လုပ်ကျွေး ပြုစုနေ တဲ့ သမီး အလိမ္မာ လေးဖြစ်ပြီး ဘာသာ ရေး ကိုင်းရှိုင်း သူတစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါတယ် ။ ထို့အပြင် ဖြူဖြူထွေး က တော့ အလှူ အတန်းနဲ့ ပတ်သက် လာရင် လည်း လက်မနှေး တတ်ပဲ မကြာ ခဏ ဆို သလို တတ်နိုင် သလောက် အလှူအတန်းတွေကို ပြုလုပ်လေ့ရှိ သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာဆိုရင် လည်း သူမရဲ့ (၂၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေး မှာ ဇာတိရွာလေး ကိုပြန်ပြီး အလှူတွေ လုပ်ရင်း ကုသိုလ်ယူခဲ့ တဲ့ အကြောင်းလေး ကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ မျှဝေပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ‘ ဖြူဖြူ့ ရဲ့ (၂၂) မြောက်မွေး နေ့ လေး မှာ နှစ်တိုင်းရွာပြန် ကုသိုလ်လေး လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီနှစ်လည်း နိုင်ငံရေး အခြေနေ တစ်ရပ် ကြားထဲက နေ ရွာပြန် ပီး ဖြူဖြူ တတ် နိုင်သ လောက် လေး လှူဒါန်းရင်း ကုသိုလ်ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်…ပြည်သူအားလုံး လည်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပါစေ လို့ ဖြူဖြူရဲ့ မွေးနေ့လေး မှာကုသိုလ် ပြု ရင်း ဆုတောင်း ပေး လိုက်ပါတယ် အမိမြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ‘ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ အလှူပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .
ျဖဴျဖဴေထြး က ေတာ့ ဟာသ ဗြီဒီယိုေလး ေတြ က တဆင့္ လူသိ မ်ားလာခဲ့ ၿပီး သူမရဲ့ ႀကိဳးစားမႈ ေၾကာင့္ အခ်ိန္တို တြင္း မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ ရရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … .
ျဖဴျဖဴေထြး က ေတာ့ မိဘ ကို သိတတ္ၿပီး လုပ္ေကၽြး ျပဳစုေန တဲ့ သမီး အလိမၼာ ေလးျဖစ္ၿပီး ဘာသာ ေရး ကိုင္းရွိုင္း သူတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ထို႔အျပင္ ျဖဴျဖဴေထြး က ေတာ့ အလႉ အတန္းနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ လည္း လက္မေႏွး တတ္ပဲ မၾကာ ခဏ ဆို သလို တတ္နိုင္ သေလာက္ အလႉအတန္းေတြကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔မွာဆိုရင္ လည္း သူမရဲ့ (၂၂) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ေလး မွာ ဇာတိရြာေလး ကိုျပန္ၿပီး အလႉေတြ လုပ္ရင္း ကုသိုလ္ယူခဲ့ တဲ့ အေၾကာင္းေလး ကို သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ မၽွေဝေပးလာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ျဖဴျဖဴေထြး ကေတာ့ ‘ ျဖဴျဖဴ႕ ရဲ့ (၂၂) ေျမာက္ေမြး ေန႔ ေလး မွာ ႏွစ္တိုင္းရြာျပန္ ကုသိုလ္ေလး လုပ္ခဲ့ပါတယ္ ဒီႏွစ္လည္း နိုင္ငံေရး အေျခေန တစ္ရပ္ ၾကားထဲက ေန ရြာျပန္ ပီး ျဖဴျဖဴ တတ္ နိုင္သ ေလာက္ ေလး လႉဒါန္းရင္း ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္…ျပည္သူအားလုံး လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းပါေစ လို႔ ျဖဴျဖဴရဲ့ ေမြးေန႔ေလး မွာကုသိုလ္ ျပဳ ရင္း ဆုေတာင္း ေပး လိုက္ပါတယ္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ‘ ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ သူမရဲ့ အလႉပုံရိပ္ေလးေတြကို မၽွေဝေပးလာခဲ့ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post မန္တလေး” သပြေညို တိုက်ပွဲ ” ထိုင်သပိတ်တွင် ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း
Next post ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ သီချင်းလေး ကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မျက်ဝန်းရဲ့ သီချင်း ရုပ်သံ